सम्पादकीय – Interview Nepal
Aug232021 by Interview NepalNo Comments
नारी भित्रको संरचना
ब्यानर समाचार, विचार, समाज, सम्पादकीय
मैले आमा भने देखि नजिकबाट महसुस गरेको पात्र नारी कुनै जात होइन । बा ले वारवार यी नारीको जात भनेर भन्दै गर्दा मलाइ नारी के हो भन्ने नै थाहा थिएन । एउटा छुट्टै प्रकृति, आकार,बानी अनि संरचनालाइ नारी भनिन्छ जस्तो मेरो बाल मस्तिष्कमा कोरि रहने चित्र हो नारी । मैले धेरै चोटि आफ्नु मस्तिष्कलाइ जोड दिँदै चित्रलाइ कोर्ने जमर्को गरेकै हो, तर मेरा भर्खर दुधे बालक मस्तिष्कमा आकृती बन्न नसकेकि नारी बाहिर कुनै फरक संरचना नभए पनि भित्री संरचना फरक रहेछ । मैले आमा भने देखि प्रीयसी सम्म भनेर सम्बोधन गरेको पात्र नारी, त्यो एउटा फगत संरचना मात्र नभएर त्यो महसुस हो रहेछ । समाजले सदैव कमजोर अनि हेलाँको बिचमा राख्न रुचाउने नारी पात्र भित्र ममता रुपि संरचना छ । पुरुष भित्रको अहम्तामा नारी पात्र एउटा कथाको पात्र मात्र हुन। हामी पुरुष प्रधान समाजमा छौँ । मैले पहिलो संगत गरेको पुरुष जातिमा मेरा बा,बा भित्र छुट्ट...
Aug52021 by Interview NepalNo Comments
प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण खोटाङ
आर्थिक, ब्यानर समाचार 2, समाज, सम्पादकीय
२१ साउन २०७८ खोटाङ केशब श्रेष्ठ नेपालको पूर्वि भागमा अवस्थित खोटाङ जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको छ । पहिले यस क्षेत्रमा खोटेहाङ नाम गरेको किरात सभ्यताका राजा थिए र उनैका नामबाट खोटाङ नाम रहन गएको भन्ने यहांको समुदायको मान्यता छ । पूर्बको पशुपतिनाथको नामले चिनिने हलेसि मन्दिर पनि खोटाङ जिल्लामै पर्दछ । हलेसि हिन्दु, किरात र बौद्ध धर्मावलम्बिको साझा तीर्थस्थल हो । यहाँ देश बिदेशका मानिसहरु धार्मिक आस्था बोकेर आउने गर्दछन् । हलेसि गुफाको प्राकृतिक भुवनोटको संरचना बिश्वमै अनौठो मानिन्छ । यहाँ मनोरम प्राकृतिक दृश्य एवमं बिभिन्न अनौठा र आकर्षक चट्टानले भरिपुर्ण मन लोभ्याउने दृश्य देख्न सकिन्छ । हलेसिलाई हिन्दु धर्मावलम्विले पुर्वको पशुपति, बौद्ध धर्मालम्विले दोस्रो लुम्विनी र किरात धर्मावलम्विले आदिम भुमि मान्दै आइरहेका छन् । हलेसी मह...
Jun282021 by Interview NepalNo Comments
कृर्षि, जिवनसैली, मौसम, समाज, सम्पादकीय
जब हिलोको गन्ध आउन थाल्छ तब सुरु हुन्छन झ्याउँकिरिका झ्याँइझ्याँइ,भ्यागुताका ट्वारट्वार अनि गाउँमा सुरु हुन्छ असार । भाखाहरु घन्किन थाल्छन । बर्षातीहरु तयारी हुन थाल्छन ,अनि सुरु हुन्छ असार । खेतको बिचमा मात्र हरियो हुन्छ । केही थान टाउकाहरु कोदालीले डिल हाल्दै देखिन्छन केही थान राता लुगा लगाएका टाउकाहरु घाँसका भारीका साथ उकाली लाग्छन । अनि सुरु हुन्छ असार । धिप धिप पानीका फोकाहरु,खहरेका सुसेलीहरु अनि बियाढका बिउ माथीको हावाको बयली, साच्चै असार बर्षातको समय हो । कसैले बनाउन नसक्ने बाटाहरु बर्षातले बनाउँछ । कसैले फुटाउन नसकेका चट्टान बर्षात ले फुटाउछ । खहरेलाई बाटो खहरेले बनाउछन,खोलाहरुले बालुवाका भुल्काहरुलाइ आफुसँगै अनन्त यात्रामा लिएर जान्छन । बर्षातका बाटाहरु नत कसैले रोक्न सक्छ न त कसैले छेक्न नै । अनन्त यात्रामा निस्किएका बर्षातहरु धर्तीलाई सिँचित गर्छन र त असार आउँछ । गोठाला र ...
May252021 by Interview NepalNo Comments
ओली सरकारका मन्त्रीहरु किन गैरजिम्मेवार र आलोचीत काम मात्र गरिरहन्छन ?
ब्यानर समाचार, राजनिती, विचार, समाज, सम्पादकीय
काठमाडौ बर्तमान सकारका मन्त्रीहरु अनेक हकर्तले चर्चामा आईरहेका छन। कहिले सार्बजनीक कायर्यक्रममा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गरेर होस त कहिले रुखबाट कार्बनडाईअक्साईड पाउछौ भनेर होस कुनै न कुनै रुपमा चर्चामा आएर आलोचनाको शिकार भईरहेका छन । यस्तै आलोचनाको शिकार भएका अर्का मन्त्री हुन,,प्रेम आले डोटीबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित यी मन्त्री बारम्बार बिबादीत अभिब्यक्ती दिएर चर्चामा आईरहेका हुन्छन । केही समय अघाडी रुखले कार्बनडाईअक्साईड दिन्छ भनेर आलोचित भएका यी बनमन्त्री अहिलेफेरि चिनीया सहयोग प्राप्त अक्सिजनमा फोटो अंकीत गरेर सामाजीक सन्जाल देखि यत्रतत्र आलोचीत भईरहेका छन । बनमन्त्री आलेले चिनबाट प्राप्त भएको अक्सिजन सिलिण्डर मा आफुले सौजन्य गरेको भनी स्टीकर टासेर बितरण गरेपछि चर्चीत बनेका हुन । केही दिन अगाडि चिनीया सरकारले सहयोग गरेको अक्सिजन सिलीण्डरमा आलेले आफ्नो नाम र सौजन्य गरेको ब्...
Mar312021 by Interview NepalNo Comments
अग्रगमन का अरवे क्रान्तिकारी मित्रहरु !
राजनिती, विचार, सम्पादकीय
पामेल उपाध्यय बाल्यकाल मै सुनेको क्रान्ती, वलिदान, वर्गसंघष, साम्यवाद, जीन्दावाद, मूर्दावाद को नारा बिर्सन सक्तैन। यस्को भूत सवार जिवितै हुञ्छ। स्कुले जीवन सकेर कलेज पुग्ने बित्तिकै हाजिर हुन नपाउदै पढाइ छाडेर बन्द हड्ताल गर्दै चोक गल्ली हाट बजारमा, सोभियत कालिन अग्रगमन का भाषण गर्दै जन्म दिने आमा, कर्म दिने बुबा, शिक्षा दिने गुरु र पुरै समाज लाई शत्रु ठान्न पुग्दछ। अन्तत: करदाता र मतदाता मा परिणत भएको उस्को राजनीतिक, विदेश यात्रा नै अन्तिम गन्तव्य बन्न पुग्दछ। तर, आफू मा सवार भएको साम्यवाद को भूत लाई सफल पारी आमा बुबा गुरु र समाज लाई गलत सावित जो गर्नु छ। बिदेश र परिश्रम यस्तो चिज हो जहाँ सेकेण्ड को महत्त्व हुञ्छ। उस्लाई रातभरी निन्द्रा लाग्दैन। ऊ मेहनती छ। नशा नशामा क्रान्तिका भ्रुण हरु दौडिरहेका हुञ्छन्। दक्षिणपन्थी र साम्यवाद को व्याख्या र फरक छुट्टयाउने अथाहा ज्ञान को भण्डार छ। ग्...
Mar112021 by Interview NepalNo Comments
भक्तपुरबाट स्रोत नखुलेको ४२ लाखसहित एक जना पक्राउ
अपराध, मुख्य समाचार, समाज, सम्पादकीय
काठमाडौं , फागुन २७ । भक्तपुर प्रहरीले स्रोत नखुलेको रु ४२ लाखसहित एक जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिको टोलीले मध्यपुरथिमि–३ कौशल्टारस्थित अरनिको राजमार्ग सडकमा जाँचको क्रममा दोलखा घर भई हाल सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोट रोज भिलेज बस्ने सुमन घिमिरेको साथबाट रकम बरामद गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिका अनुसार जाँचका क्रममा गाडीमा आइरहेका घिमिरेको साथबाट रु २७ लाख र निजको कोठा खानतलासी गर्दा थप रु १५ लाख बरामद भएको हो । प्रहरीले उक्त रकमको स्रोत खोज्दा बताउन नसकेपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा घिमिरेले उक्त रकम जुवातास खेलेर जितेको हुनसक्ने बताएको छ । ...
Feb252021 by Interview NepalNo Comments
सर्वोच्चको फैसला : कार्यकर्ताको हर्क बढ्याई, तेह्र दिने सुध्धायी
राजनिती, विचार, समाज, सम्पादकीय
पामेल उपाध्याय सदर र वदरमा मलाई केही रुचि छैन। नागरिकको हैसियतले सत्य लेख्नु गलत हो भने गलत नै सहि । सामाजिक सञ्जालमा केही झोले, कार्यकर्ता र हनुमानेहरुले संसद पुन:र्स्थापनालाई जनताको जित भएको ठानेका रहेछन्। गोबर भरिएको दिमागले यसो भन्नू त ठिकै हो। हैन भने कुन जनताले संसद विघटनको कुरा उठाए र अराजक गतिविधि लाई आश्रय दिएका थिए ? कुनै-कुनै गोबर गणेश चाहिँ सभामा त्यत्रो उपस्थिति भन्छ। रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाही र पुर्व राजाले पनि उत्तिकै मान्छे जम्मा पारिरहेका छन् नगद बिनै। गोबर भरिएको दिमाग लाई यो थाहा नहुन सक्छ। "हामी यहाँ छौँ" भन्दै एउटै पार्टी भित्रका स्वयम् माहान कहलिएकाहरु कोहि सत्तामा त कोहि सडकमा उत्रिएको नदेख्ने अनुत्पादक नेता हरुका रैती र दास हरुले मान्छे भएर जिएको देख्दा पनि अचम्म लागेर आउँछ। तत्कालिन समयमा मनमोहन अधिकारीको मध्यावधीमा जाने निर्णय आई अदालत ले बदर गर्दा देशै भर...
Feb202021 by Interview NepalNo Comments
भक्तपुरमा टिपरको ठक्करबाट एकको मृत्यु
दुर्घटना, ब्यानर समाचार 2, मुख्य समाचार, समाज, सम्पादकीय, स्थानिय तह
भक्तपुर , फागुन ८ । भक्तपुर नगरपालिका–घलातेचोकस्थित अरनिको राजमार्गमा सल्लाघारीबाट जगातीतर्फ तीव्र गतिमा जाँदै गरेको टिपरले ठक्कर दिँदा आज एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । बा ५ ख ४७९ नं को टिपरको ठक्करबाट सिन्धुपाल्चोक बलेफीगाउँपालिका–७ घर भई नाइटिङ्गेल बोर्डिङ स्कुल कुपण्डोल ललितपुरमा चालकको रुपमा काम गर्ने ३५ वर्षीय बलराम तामाङ्को मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । प्रहरीले टिपर र चालक सिन्धुपाल्चोक साँगा चोक गढी नगरपालिका–११ का २९ वर्षीय सुरेन्द्र खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।...
Jan62021 by Interview NepalNo Comments
तिमी लड्नैको निम्ति जन्मिएका हौँ
विचार, समाज, सम्पादकीय
पामेल उपाध्यय/काठमाण्डौँ, पुष २२ तिमी लड जति सक्छौं त्यती लड। लम्किदै लड, घिस्रिदै लड। जोसिदै लड, मुठ्ठी उझाई लड। शीर झुकाएर होस् वा उठाएर होस्, पिठ्युँ फर्काएर होस् वा छाती फुलाएर होस् लड्न नछोड। तिमी लड्न लाई जन्मिएका हौँ त्यसै ले पाखुरा सुर्किएर लड, तिघ्रा ठटाएर लड। मस्त जवानी को झोक झै राग उकाल्ने गरि लड। मान्छे भएर जन्मिनुमा एउटा सार्थकता हुञ्छ, त्यसलाई लडाईमा बदल। जीवन नै लडाई हो भन्ने सम्झि कर्म लाई थाती राख्दै लड। हस्तिनापुर को बाँस होस् वा चपरी मुनि को बाँस लडाई निरन्तर जारी राख्दै अनन्तकाल सम्म भक्त भएर लड। लडाई लाई नै भाग्य विद्याता सम्झी इमान्दार मेहनत र परिश्रम भएर होईन भक्त हनुमान भएर लड। कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र बैचारिक वहसको युग समाप्त भएर स्खलित युग को सुरुवात भएको घोषणा गर्दै लड। तिमी छौँ र त यहाँ सबै कुरा सम्भव छ। तिम्रा केही उच्च नेताहरु ले बोलेको तुच्छ वाक्य लाई ...
Dec302020 by Interview NepalNo Comments
कोरोनाकै कारण २ लाख नेपाली स्वदेश फर्किए , तत्काल १० लाखलाई रोजगारी आवश्यक
मुख्य समाचार, समाज, सम्पादकीय
काठमाडौं , पुस १५ । विश्‍वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण झन्डै २ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोनाका कारण देशैभित्र सबैभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले अहिलेको अवस्थामा १७ लाख नेपाली बेरोजगार भएकाले तत्काल १० लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । कोरोनाको कारण विदेशमा तीन लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने देशभित्र नौ लाखको रोजगारी गुमेको छ । विदेशमा भएका ३२ लाखमध्ये ६ लाख नेपाली अहिले फर्कने तयारीमा छन् । त्यसमध्ये चार लाख नेपाली कोभिडकै कारण तत्काल फर्कनुपर्ने अवस्थामा छन् । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख युवा भित्रिने राष्ट्रिय योजना आयोगलको तथ्यांक छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा कोरोनाले पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । ११२ देशमा रहेका नेपालीमा गरेको अध्ययनअनुसार ३५ लाख नेपाली विदेशमा छ...